भोलिको दिन लगानीकर्ताहरुका लागि विशेष रहने; बजार ३००० कि २६०० ? – Facebook Khabar
आज सोमबार नेप्सेको चार्ट्मा स्पिनिङ्ग टप क्यान्डल बन्यो। यसले बजारमा खरिद चाप र बिक्रि चाप दुबै लगभग समान रुपमा रहेको संकेत गर्दछ। नेप्से १९.४३ अंकले बढ्दा ७ अर्ब १२ करोड भन्दा बढी रकमको कारोबार भएको छ । सुरुवाती चरणमा बढेर २८०६ भन्दा माथि गएको नेप्से दिनभरीमा उतार चढाव हुँदै घट्ने क्रममा २७५४ को बिन्दुसम्म आइपुगेको थियो ।
कारोबारको अन्तिम ३० मिनेटमा १ अर्ब २० करोड भन्दा बढीको रकमको कारोबार भएको छ भने २७५४ को बिन्दुमा आइपुगेको बजार बढेर २७८४ को बिन्दुमा पुग्दा अन्तिम समयमा नेप्सेमा ३० अंकको ग्रोथ पनि भएको देखिन्छ। यसरी कारोबारको अन्तिम घन्टामा ३० अंकको वृद्धि संगै १ अर्ब २० करोडको कारोबार हुनुलाई निकै सकारात्मक रुपमा लिइन्छ। यसले बजारमा आज प्रोफिट बुक हुँदै गर्दा बजारमा डिमाण्ड पनि राम्रै छ है भन्ने संदेश दिएको छ।
स्पिनिङ्ग टप क्यान्डल लाइ कसरी ट्रेड गर्ने ?
स्पिनिङ्ग टप क्यान्डलको तल्लो बिन्दु (टेल) भन्दा तल बजार गएमा त्यसले बजार घटेर जाने संकेत गर्दछ भने नेप्से परिसूचक क्यान्डलको विक भन्दा माथि गएको अवस्थामा बजार अझै बढ्ने संकेत गर्दछ। भोलिका दिनहरुमा बजार २७५४ भन्दा तल भोलुम सहित जान थालेको अवस्थामा बजार घटेर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ भने २८०६ भन्दा माथि गएको अवस्थामा बजार अझै माथि जान सक्ने सम्भावना उच्च भएर जानेछ।
नेप्सेको डेली चार्ट प्याटर्नमा RSI १४ ६६.७७ को लेभलमा पुगेको छ। RSI ६० भन्दा माथि हुनुलाई प्राविधिक रुपमा निकै राम्रो संकेतको रुपमा लिइन्छ। RSI ७० भन्दा माथि बस्न सक्षम भयो भने त्यसले बजारको अझै माथिल्लो लेभलको बुलिश यात्राको संकेत गर्दछ।
MACD धेरै पहिले देखि नै सकारात्मक छ। MACD का हिस्टोग्रामहरु झन् झन् लामा बन्दै गईरहेका छन, जसले बजारमा उच्च खरिद चाप रहेको संकेत गर्दछ ।
विशेष के के देखिए त नेप्सेको चार्ट्मा ?
नेप्सेको डेली क्यान्डल २०० दिनको मुभिंग एभरेज लाइनलाई सपोर्ट बनाउँदै माथितिर गएको छ। यसले एकदमै राम्रो संकेत गर्दछ। २०० दिनको मुभिंग एभरेज भन्दा माथि बजार रहनुले बजारमा बुलिश सेन्टिमेन्ट हावी हुँदै गएको र बजार बुलिश बनेको संकेत गर्दछ।